ShweMinThar: ပိန်သူတွေ၊ ကြွက်သားတက်ဖို့ ခက်သူတွေ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ? (Skinny to Fit)
ပိန်သူတွေ၊ ကြွက်သားတက်ဖို့ ခက်သူတွေ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ? (Skinny to Fit)
ကမ်းခြေမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေကူးကန်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးမှာ အမှတ်တရ လှတပတ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်လှအောင် ပန်းတိုင်ထား ဆော့တတ်ကြတာ အစဉ်အလာ တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒီအချိန်တွေနဲ့ပဲ တိုက်ပြီး ၀တဲ့လူကလဲ ပိန်အောင် အဆီချဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိသလို၊ ပိန်သူတွေ အနေနဲ့လဲ ကြွက်သားတက်လာအောင် လုပ်ဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိတာ မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ အလွယ်ကူဆုံး ဥပမာ ပေးရရင် တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေ ကမ်းခြေခရီး မသွားခင် ၂လလောက်အလိုမှာ ဗိုက်အဆီချဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ Diet စလုပ်လေ့ရှိတာကို ပြရမှာပေါ့။ ဒါမှပဲ Bikini ဖြစ်ဖြစ်၊ Swim suit လေးတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ အခါလှမှာ မဟုတ်လား။ ယောင်္ကျားလေးတွေလဲ ထို့အတူပဲ ဆိုရမှာပါ။ ဒါမျိုးကို Beach body goal လို့ ဆိုတတ်ကြပါတယ်။
၀သူတွေ ပိန်အောင် အဆီချဖို့ ဆောင်းပါးများစွာ Golden Dreams page ထဲမှာ ရေးပြီးပြီမယ့် ပိန်သူတွေ၊ ကြွက်သားတက်ဖို့ ခက်သူတွေ အတွက်တော့ သိပ်များများစားစား အဓိကထား မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကလဲ ပိန်သူတွေ အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးပိုင်းမှာ ၀သူတွေလောက် နစ်နာမှု မရှိတာမို့ ၀သူတွေအတွက် အရင် အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အဆီချဆောင်းပါးတွေ ဦးစားပေးရေးဖြစ်တာလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ပိန်သူတွေ အတွက်လဲ Fit ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ မေးသူတွေ ရှိတာမို့ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပိန်သူတွေ ဘယ်လို Fit ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အကြောင်း စလိုက်ကြရအောင်။ စိတ်ထဲရှိပေမယ့် အချိန်တော်တော်ကြာမှ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးဖြစ်တာတော့ စိတ်မရှိစေချင်လို။
" ပိန်ချင်လိုက်တာ "
ဒီစကားက သိပ်မမှန်ပါဘူး။ နောက်တစ်မျိုးက
" ၀ချင်လိုက်တာ " ဆိုတာပါပဲ။ ဒါလဲ မမှန်ပါဘူး။ တစ်ကယ် မှန်ကန်တဲ့ ရည်မှန်းချက်က
" ကြွက်သားနဲ့ လှပြီး၊ သန်မာချင်တာ " လို့ ဆိုရမှာပါ။ ပိန်တာကို လိုချင်တာလဲ မဟုတ်သလို ၀လာတာကိုလဲ နောက်ဆုံးပန်းတိုင် အဖြစ်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား။ ( ဒီနေရာမှာ ပိန်နေ၊ ၀နေသူတွေကို မလှဘူး၊ မကောင်းဘူး ဆိုလိုချင်စရာ အကြောင်းမရှိ။ လူဆိုတာ ကိုယ့် ရွေးချယ်ချက်နဲ့ ကိုယ်မလို့ ရှုံ့ချစရာကို မလိုပါ။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲချင်ပြီး လုပ်နေသူများအတွက်သာ ပန်းတိုင် ဘယ်လိုရှိသင့်လဲ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း)
ဒီလို ပိန်ချင်တာ၊ ၀ချင်တာ မဟုတ်ပဲ ကြွက်သားနဲ့ လှချင်တာပါလို့ ကပ်ပြောရလဲဆိုရင် ပန်းတိုင်မတူရင် လုပ်ပုံ မတူလို့ပါပဲ။ အလွယ်ပြောရရင် ပိန်ချင်သူများအနေနဲ့ ပြေးတာ၊ အစာထိန်းစားတာ တစ်ခုထဲနဲ့တင် ပိန်သွားနိုင်ပေမယ့် ကြွက်သားနဲ့ လှချင်ရင်တော့ ပြေးရုံ တစ်ခုထဲနဲ့ မရဘူးပေါ့။
၀လာချင်သူတွေအတွက်ဆို မြင်သမျှစား၊ မြင်သမျှစားနိုင်ဖို့ အစာခြေနှုန်းလေး တက်အောင် ပြေးမယ်၊ ခုန်မယ် လုပ်ရုံနဲ့ ၀လာမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာ ကြွက်သားမပါပဲ ၀ရုံ ၀လာမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာလဲ သင်တို့ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလာရင် ချွေးတွေ၊ အချိန်တွေ သိပ်နှမျောဖို့ ကောင်းတယ်ဟုတ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးမှာ ပိန်သူတွေ ၀လာစေရုံ သက်သက်မဟုတ်ပဲ၊ ကြွက်သားလှပြီး Fit ဖြစ်၊ Muscular ဖြစ်စေမယ့် နည်းတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၁။ မျိုးရိုးကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့
" တို့ မျိုးရိုးကိုက ဒီလိုပဲထင်ပါတယ်၊ အကုန်လုံး ကပ်ကပ်တွေချည်းပဲ "
ဒါကတော့ ပိန်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၀သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်မှာ ကြားနေရတာပါပဲ။ မစရသေးဘူး၊ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ ကိုယ့် ခန္ဓာတည်ဆောက်ပုံကြောင့်ပါလို့ ဆိုလေ့ရှိတယ်မဟုတ်လား။
မျိုးရိုးက ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သက်ရောက်လေ့ရှိတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး၊ အရပ်အမောင်း၊ ရင်အုတ်အကျယ်အကား၊ အဆီစုတဲ့နေရာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် တုန့်ပြန်မှု အနှေးအမြန်၊ အစာခြေနှုန်း စတာတွေဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဘယ်တော့မှ မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လှတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ လုံးဝမတူတာမို့ ကိုယ်တော့ သူ့လို မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး အပြစ်တင်လို့လဲ မရပါဘူး။ အလွယ်ကူဆုံးနားလည်အောင် ပြောရရင် တစ်ချို့လူတွေ ၈ ကြိမ်ကို ၅ခေါက်လုပ်ရုံနဲ့ ကြွက်သားတွေကို လှုံ့ဆော်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်တဲ့အခါ လုံလောက်ချင်မှ လုံလောက်ပါလိမ့်မယ်။ မျိုးရိုးမှ မတူတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မလုံလောက်ရင် ၁၀ကြိမ်ကို ၆ခေါက်လုပ်မယ်၊ အနည်းငယ်ပို ပြင်းထန်အောင်လုပ်ရမယ် စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြင်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ ဒီပမာဏလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ Guide ပဲရှိပြီး လူတိုင်း ဒီပမာဏပဲလုပ်ပါဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းမရှိတာပေါ့။
ပထမအချက်အနေနဲ့ မျိုးရိုးကြောင့် ဘယ်လိုလုပ်လုပ် အမြဲ ပိန်ကပ်နေမှာပါဆိုတဲ့ အယူလေးကို ပြင်လိုက်ပါစို့။
၂။ အစားအစာ ပိုစားပါ
Six packs လဲ ဒါ၊ ပိန်ချင်လဲ ဒါ၊ ၀ချင်လဲ ဒါ
ဟုတ်ကော ဟုတ်သေးရဲ့လား။ ဥပမာပေးရရင် မြေစေး အရုပ်လေးတွေ လုပ်သလိုပေါ့။ သေးသွားချင်ရင် မြေစေးလျှော့၊ အကြီးကြီး လုပ်ချင်ရင် ပိုထည့်။ ဒီလိုပါပဲ။ လူတစ်ယောက်မှာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် Equation မှာ ကိန်း ၂မျိုးကပဲ အဓိက ချယ်လှယ်လေ့ရှိတာပါပဲ။ အစားအစာနဲ့ အားကစားပါပဲ။ ပုံပြောင်းချင်ပြီး ဒီ ကိန်းနှစ်ခုကို အပြောင်းအလဲ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီ Equation ကလဲ ပြောင်းလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
" စားတာမှ တစ်ဖြဲ နှစ်ဖြဲ "
ဒီလို ပိုစားပါလို့ အကြံပေးသံကြားရင် အကြံပေးတဲ့သူကို မယုံသင်္ကာဖြစ်ပြီး လှည့်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
"ဒီလောက်စားနေတာကို ဘယ်လိုလုပ်ထပ်စားမလဲ၊ ဒီဆရာမှာ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ နည်းတွေ မရှိတော့ဘူးလား။ "
များသောအားဖြင့် ပိန်သူတွေဟာ သူတို့စားတဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏကို ပိုတွက်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်လောက်ပဲ အများကြီးစားတယ် ပြောပြော ခန္ဓာကိုယ်က သူတို့စကားကို နားထောင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ် နားထောင်တဲ့ စကားက
" အ၀င်စွမ်းအင် (အစာ) က အထွက်စွမ်းအင် (ပုံမှန်လှုပ်ရှားတာ၊ အားကစားလုပ်တာ) ထပ် ပိုများရမှာပါပဲ။ အ၀င်က အထွက်ထပ် များရင် အလေးချိန်တိုးပေးမယ် "
ဒီစကားကိုပဲ နားထောင်တာပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းက အထွက်စွမ်းအင် တစ်အားများနေရင် (အချိန်ကြာပြေးတာ) လျှော့ရမှာပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းကို မလျှော့ချင်ရင် ဒီဟာကို ပြန်ကာမိစေဖို့ ပိုစားရမှာပါပဲ။
ပိုစားတဲ့အခါမှာ အစာခြင်းတူပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီပြီး ကြွက်သားအတွက် အထောက်အကူပြုမယ့် အစာတွေစားရင် အလေးချိန်တက်စေဖို့ ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ချို့ စွမ်းအင်များတဲ့ အစာတွေက
- Peanut butter (ပေါင်မုန့်နဲ့စားလေ့ရှိတဲ့ မြေပဲယို)
- အဆီမပါ အသား ငါး
- သီဟိုစေ့ ၊ မြေပဲစေ့
- ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်
စတာတွေပါပဲ။ ဒီထဲမှာ နည်းနည်းစားပြီး များများ အလေးချိန်တက်စေတာကတော့ Peanut butter ပါပဲ။ Peanut butter တစ်ဇွန်းဟာ ထမင်း တစ်ပန်းကန်စာလောက်နဲ့ ညီပါတယ်။ Peanut butter ၂ဇွန်းလောက် ပေါင်မုန့်နဲ့ ရောစားလိုက်တာကိုကပဲ ထမင်း ၂ပန်းကန်လောက် ပိုစားသလိုပါပဲ။
စားသင့်တဲ့ ပမာဏကတော့ တစ်လကို ၃ ပေါင်လောက်၊ ၂ပတ်တစ်ခါ ပေါင်ချိန်မယ်ဆို နှစ်ပတ်ကို ၁ပေါင်ခွဲ၊ ၂ပေါင်လောက်တက်လောက်အောင်စားပါ။ ဒါ့ထက်ပိုသွားရင် နည်းနည်းလျှော့၊ လိုနေသေးရင် ထပ်ပြီး တိုးစားပါ။
၃။ အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပါ
အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ အလေးနဲ့ ထိုင်ထ Squat၊ ဒိုက်ထိုး သို့မဟုတ် အလေးနဲ့ ရင်ဘတ်တွန်းတင် Bench press၊ Deadlift ၊ ပုခုံးလေ့ကျင့်ခန်း စတာတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လေ ပိုများများစားဝင်နိုင်လေ ဆိုတဲ့ အချက်အပြင်၊ အလေးချိန်တက်လာတဲ့ အခါမှာလဲ အဆီသက်သက်မဖြစ်တော့ပဲ ကြွက်သားပါတက်လာပြီး လှစေနိုင်မယ့် အချက်တွေကြောင့်ပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်ရင်ရော ရလား ဈေးဆစ်တတ်သူများအတွက် မလုပ်ရင် မလုပ်သလောက် အကျိုးသိပ်မရဘူးပေါ့လို ဖြေရမှာပါပဲ။
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်ဘူးဆိုရင် အနည်းငယ် ပြည့်လာမှာတော့ အမှန်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပြည့်လာရုံတင်မကပဲ ကြွက်သားနဲ့ပါ လှလာချင်ရင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြည့်လာချင်ရုံသက်သက် သမားဆိုရင်တော့လဲ ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ လုပ်နိုင်မယ့် ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်ခန်းပုံတွေ ပြထားပါတယ်။
Gym သွားပြီး လုပ်သူတွေအတွက်တော့ အပေါ်က အခြေခံ ကျား၊မ မရှိမဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းလေးမျိုး အကြောင်းကို ဒီ လင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီးဖတ် ~ LINKS
၄။ Overtraining ဖြစ်မှာ မကြောက်ပါနဲ့
တစ်ချို့ ကြွက်သားထွက်ဖို့ ခက်တဲ့လူတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတာကတော့ လုံလောက်အောင် မလုပ်ဖြစ်တာပါပဲ။ ဥပမာ ရင်ဘတ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးကို
အကြိမ် ၁၀ x ၄ခေါက်လောက်ပဲ လုပ်တတ်တာမျိုးပေါ့။ သူတို့ အနေနဲ့ ဒီပမာဏပဲ လုပ်တာကလဲ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဒီလောက်ပမာဏပဲ လုပ်ရင်တောင် ၃၊ ၄ ရက်ကြာတဲ့ အထိ ကြွက်သားနာနေသေးတာမို့ ဒါ့ထက်များပိုလုပ်လိုက်ရင် ဒဏ်ဖြစ်သွားမှာကို စိုးတာလဲပါတာမို့ overtrain ဖြစ်မှာ ကြောက်တာ သဘာဝတော့ ကျသား။
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းတစ်ခုမေးလို့ရပါတယ်။Gold roast ကြေငြာသလို လေ့ကျင့်တာ များသွားတာလား၊ ကြွက်သားပြတ်တောက်တာကို ခန္ဓာကိုယ်က ပြုပြင်မွမ်းမံတာ နှေးတာလားပေါ့။
Overtraining or Under recovery ???
Overtraining ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Professional တွေမှာ ဖြစ်တာများပါတယ်။
အခုမှ ကြွက်သားလှချင်လို့ စလေ့ကျင့်သူတွေထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးက Recovery နှေးတာပါပဲ။ Gym ဆော့ရုံ၊ အလေးမရုံ လုပ်ပြီး ကြွက်သားတွေကို ပြတ်တောက်စေရုံနဲ့ မရပါဘူး။ Gym ထဲမှာ ရှိတဲ့ ၁နာရီထက် Gym အပြင်မှာ ရှိတဲ့ ၂၃နာရီက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
Protein များတဲ့ အစားအစာတွေ စားမယ်၊ နေ့စဉ်အိပ်စက် ချိန်များအောင် အိပ်မယ်။ ဒါတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
၀ါရင့်တဲ့လူတွေက Recovery ဖြစ်ဖို့ ၇နာရီလောက်ပဲ အိပ်ဖို့လိုတယ်ဆို ကိုယ်က ၈နာရီအိပ် စသဖြင့် Recovery ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒဏ်မြန်မြန်ပျောက်လေ၊ အားအပြည့်ဖြစ်လေ၊ အကြိမ်ရေပိုတိုးနိုင်လေ၊ အလေးပမာဏ ပိုတိုးနိုင်လေ စသဖြင့် ရှေ့ဆက်တိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို ရှေ့ဆက်တိုးနိုင်လေ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကြီးထွားဖို့ အကြောင်းပြချက်ရှိလေမို့ သင်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို မြန်မြန်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ မီးစက်တစ်လုံးလို မဟုတ်ပါဘူး။ အခုဓါတ်ဆီထည့်၊ အခု လျှပ်စစ်မီးထွက် မဟုတ်တာမို့ အချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
၁လ အကြာမှာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကိုယ်စားနေတဲ့ ပမာဏဟာ တစ်လကို ၃ပေါင် သို့မဟုတ် ၄ပေါင်တက်စေလား ဆိုတာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ပတ်လောက်နဲ့ တော့ ပြောင်းလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုမျိုး တစ်လမှာ ၃ပေါင်လောက်တက်လာတယ်၊ Gym မှာလဲ အကြိမ်ရေ ပိုများများလုပ်နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် အလေးပမာဏ ပိုတိုးလာနိုင်တယ် ( အိမ်မှာဆိုလဲ အိမ်မှာပေါ့) ဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် သိပ်မထူးခြားလာသေးဘူးဆိုရင်တော့ အစားအသောက်ကို ပိုစားနိုင်သလို၊ ကြွက်သားတက်တာနှေးရင် အကြိမ်ရေတိုးတာ၊ အလေးပမာဏ ပိုပေါင်းတာ လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Point တစ်ခုရောက်သွားရင် ( တိုးတက်လာတာ တွေ့ရရင်) စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆက်လုပ်၊ ဆက်စား၊ ဆက်နားပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်။
၁- မျိုးရိုးကို အပြစ်တင်စရာမလိုပါ။ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ Fit ဖြစ်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။
၃- အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပါ။ (ကျား၊မ မရှိမဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးမျိုး)
၄- Overtraining ဖြစ်မှာ မကြောက်ပါနဲ့။ Recovery ကောင်းအောင် ကြိုးစားပါ။
၅- စိတ်ရှည်ပါ။ မှန်ကန်တဲ့ ရလဒ် ရလာရင် စွဲမြဲပြီး ပိုတိုးတက်အောင် လုပ်ပါ။
အားလုံးပဲ Skinny ကနေ Fit ဖြစ်ပြီး ပုံလှလှလေးတွေ တစ်ချိန်ကျ ရိုက်နိုင်တဲ့ တစ်နေ့ကျ လာကြွားဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့။
Skinny Friend လေးတွေ ရှိရင်လဲ လက်တို့ပြီး ဝေမျှနိင်ပါကြောင်း။